​अधिनायकवादी कांग्रेस कि कम्युनिष्ट ?
Thursday, 16 Nov, 2017 6:06 PM
काठमाडौं । वामशक्तिले बहुमतको बलियो सरकार चलाएको जनताले कहिले पनि देख्न र भोग्न पाएका छैनन् । त्यो यसपटक पाउनेवाला छन् । त्यसबाट आत्तिएको कांग्रेस अहिले वामशक्तिलाई अधिनायकवादी भनिरहेको छ । प्रहरीमा बरिष्ठतामा एक नम्बरमा रहेका र कार्यक्षमतामा अब्बल डीआइजीलाई आइजीपी बनाउन आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने कांग्रेस प्रजातन्त्रवादी कि अधिनायकवादी ? कि कांग्रेसलाई स्वतन्त्र न्यायालयको अस्मिता लुट्ने र न्यायालयको सुधारमा क्रियाशील प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने छुट छ ? कांग्रेसले जे गरे पनि प्रजातान्त्रिक ? उसले जे जस्ता जनविरोधी हर्कत गर्दा पनि प्रजातन्त्रको बर्को ओढ्दै आएको छ । वामपन्थीहरुका विरुद्ध अधिनायकवादीको बिल्ला भिराउने गरेको छ । अधिनायकवादी काम भने कांग्रेसले नै गर्दैआएका एकपछि अर्को उदाहरण छन् ।
प्रहरी ऐन, नियम पालना गर भनेर सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्न खोज्ने साहसी प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाभियोग लगाएर कांग्रेसका सभापति देउवाले अहिले न्यायालयलाई कांग्रेसको पिछलग्गु बनाउन खोजेको कुरा लुकेको छैन । नेपाल प्रहरीभित्र धेरै राम्रा काम गरेका क्षमतावान डीआइजीलाई बलात् आइजीपी हुनबाट बन्चित गरी आफ्नै गाउँकालाई प्रमुख बनाउन खोज्ने देउवा अधिनायकवादी हुन् कि होइनन् ? यो ७० हजार प्रहरी फोर्सका करिब ८० प्रतिशतले बुझेका छन् । प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सुरुवात यिनै देउवाले २०४८ पछि बनेको कांग्रेसको सरकारका गृहमन्त्री भएपछि सुरु गरेका हुन् । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजीपी रत्नशमशेर राणालाई अपमानपूर्वक नियम कानुन कुल्चेर कार्यकालै नै पूरा गर्न नदिई हटाउने देउवा नै हुन् । राणाले आइजीपी निवासमा छोराको बिहेपार्टी गर्न निम्तोकार्ड सबैलाई बितरण गरिसकेपछि पार्टीसमेत गर्न नदिने हर्कत देउवा गृहमन्त्री हुँदा भएको थियो । छोराको बिहे गर्न दिएर २ दिनपछि हटाउँदा के आकाश खस्थ्यो ? राणालाई न्यूनतम मानवीय संवेदनासमेत नदेखाई हटाउने काम यिनै देउवाले गरेका थिए । जुन पीडा सहन गर्न नसकी राणाको आइजीपीबाट अपमानपूर्वक हटाएको एक महिनामै देहान्त भएको थियो । राणाको निधन हुनुमा देउवा नै जिम्मेवार हुन् भन्ने कुरा प्रहरीका एक एकलाई थाहा छ । देउवाले त्यतिबेला पनि आफ्नै गाउँकालाई आइजीपी बनाउन नियम, कानुन र प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड नै भत्काए । नेपाल प्रहरीमा त्यहीँबाट राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । जुन २०७३ फागुन १ गते पुनः दोहोरियो । नेपाल प्रहरी राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो भयो । यो सबै देउवाकै कारण हो । फौजमा सिनियरीटीको महत्व हुन्छ, तर देउवाले आफ्ना गाउँकालाई प्रमुख बनाउन त्यसलाई तिलान्जली दिए । यो अधिनायकवाद हो कि होइन ?
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेझैं कांग्रेसले खेलका नियम मान्दैन, ऊ आफैंलाई खेल सम्झन्छ । खेलाडीलाई त खेलको नियम लाग्नुपर्ने हो, तर कांग्रेसलाई नियम लाग्दैन । ४ पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन आचारसंहिता मिच्नुहुँदैन भन्ने थाहा छैन र ? तर पनि उनी मिचेका मिच्यै छन् । दीर्घकालीन महत्वका सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार उनलाई कसले दियो ? यो अधिनायकवाद होइन ? यो सरकारले दैनन्दिन काम मात्र गर्नसक्छ चुनाव गर्ने सरकार हो, तर देउवा राष्ट्रिय ढुकटीबाट कार्यकर्तालाई पैसा बितरण गर्नेदेखि एआइजीपीका पद मनलागी थप्न तल्लीन छन् । एउटा एआइजीको दरबन्दी थप्दा देशलाई मासिक ५ लाख खर्च हुन्छ । यो रकमले दुर्गम ग्रामीण भेगमा एउटा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न पुग्छ । प्रहरी चौकीको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ४ सय ५० भन्दा बढी निवदेन छन् । तर देउवा सरकार प्रहरी चौकी स्थापना गर्न होइन, एआइजीको दरबन्दी बढाउने र प्रहरी संगठन लथालिङ्ग बनाउन तल्लीन छ । एआइजीको दरबन्दी ११ नै आवश्यक छैन । प्रदेशमा एआइजी राख्दा ११ आवश्यक पर्ने तर्कलाई उचित मानिएला तर १६ पु¥याएर देउवाले प्रहरी संगठनलाई अस्तब्यस्त पारेका छन् । एआइजीको दरबन्दी बढाएर चुनावमा धाँधली गर्ने सपना देउवाले देखेका हुनसक्छन् । तर त्यो पनि पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन । एआइजीको दरबन्दी बढाएर देउवाले चुनाव खर्च कुस्त असुली गरेको आरोप पनि छ ।
त्यसकारण पनि अधिनायकवादी वामशक्ति होइनन्, २७ बर्ष देशमा शासन गर्ने कांग्रेस हो भन्ने ब्यवहारबाट पुष्टी भइसकेको छ । राष्ट्रिय उद्योगहरु निजीकरणको नाममा कौडीको मूल्यमा बेच्ने, संस्थानहरुमा राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाएर ध्वस्त बनाउने जस्ता काम पनि कांग्रेसले नै गरेको कुरामा कसैको दुई मत छैन । कांग्रेसका यस्तै हर्कतका कारण परीक्षणको चाहना भन्नुस् वा कहिल्यै अवसर नपाएको कारणले औचित्य वा अरु जे भन्नुस् जनताले यो बाम नाम गरिएको शक्तिलाई आफ्नै बलबुतामा एक पटक बहुमतको सरकार चलाएको हेर्न चाहन्छन् । लेखक बाबुलाल भण्डारी लेख्छन्–त्यसैले पनि कांग्रेसको यो जो ‘अधिनायकवाद’ भन्ने पुरानो सूत्र छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यसपटक र संभवतः सधैका लागि अब भुत्ते हतियार भइसकेको छ र उल्टै बाम गठबन्धनका लागि मत हासिल गर्न सहायक सिद्ध हुंदैछ । आफ्नो कुनै नारा र कार्यक्रम छैन भने बामपन्थीहरुको विरोध मात्रले भोट आउने दिन अब रहेनन् । कांग्रेसले यो टड्कारो सत्यलाई कहिले बुझेर आफूलाई सुधार्ने बाटोमा लैजाला ?’
एसपी र इन्सपेक्टरलाई बर्खास्तीको तयारी, अन्यलाई विभागीय कारबाही हुने